Daawo:Amiirka Alshabaab Abuu Cubeyda oo fariin uu soo diray ku weeraray Saddex Dowladood Yaa kamid ah – V O S
miirka guud ee Xarakada Al-shabaab Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeyda oo fariin maqal ah soo diray ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo dagaalka ay kooxdiisu kula jirto dowlada Somalia.
Fariintan oo la dhageysan karo muddo 22 daqiiqo ah, ayuu Abuu Cubeyda si kulul ugu weeraray madaxda dowlada Somalia iyo baarlamanka federaalka.
Waxaa inoo muuqaneysa in dhowr boqol oo daneystayaal ah, sheegtana inay sharci dajiyeyaal yihiin ay masiirka Umadeena u gacan gelinayaan shisheeye, waa koox yar oo Allaah ku heysata talada iyo xukunka iyo xaqqa tashriica ee uu la gaarka yahay, Waa gole calooshood u shaqeystayaal ah oo shuruucda ay dajiyaan dalka u horseeday inuu galo maxmiyad, iyo in dhulkii uu beylah u noqdo cadowga Umadani lahayd. Waa gole dalka u gacan gelinaya cadowgeena soo jireenka ah ee Itoobiya iyo Kenya. Waxay barratan ugu jiraan sidii ay u hirgelin lahaayeen hanka siyaasadeed ee gumeystuhu ka damacsan yahay bulshadeena Muslimka ah. Waa golaha doortay hogaamiye bilaash xeyte ah, kasxumo iyo garaad la’aana ku caanbaxay, Kampala accrod-na ku garaadsaday” ayuu yiri abuu Cubeyda.
Mar uu soo hadal qaaday Khilaafkii ugu dambeeyey ee hareeyey baarlamanka dowladda Federaalka ayuu Shiikh Abuu Cubeyda tibaaxay in isqabqabsigaas uu banaanka soo dhigay wax uu ugu yeeray damaca liita iyo damiir xumada xildhibaanada iyo awoodaha gumeysi ee hadda ku loolamaya boobka hantida iyo kheyraadka dadka Soomaaliyeed.
“Wuxuu sidoo kale Khilaafku soo muujiyey laba awoodood oo ka mid ah awoodaha majaraha u haya hogaanka ridada, saameyntana ku leh gumeysiga dalka uu ku jiro, waxaa isweydiin mudan waxa lagu kala dooranayo Jawaari iyo Mursalka Turkiga ee loo doortay Baarlamaanka, waxaa sidoo kale in la isweydiiyo mudan waxa lagu kala dooranayo Turkiga iyo Imaaraatka, sow labadan dowladood ma ahan kuwa dhibaatada ba’an ku haya dalkeena, kana hortaagan in Umaddan ay isku filnaansha gaarto.” ayuu yiri abuu Cubeyda.
Dowladaha Turkiga iyo Imaraadka ayuu ku eedeeyey iney qeyb ka yihiin duulaan uu sheegay in lagu soo qaaday Somalia.
“Turkiga oo qeyb ka ah huwanta saliibiyada ah ee NATO ayaa ku takrifalaya dhaqaalaha dalka, wuxuu gacanta ku dhigay Dekada iyo Airport-ka, wuxuu dalka ka hirgeliyey saldhig military oo uu ku ilaalsanayo boobka dhaqaalaha dalkeena, waana saldhigga ugu weyn ee dalkiisa ka baxsan ee uu dunida ku leeyahay sida la ogyahay. sidoo kale Imaaraatka ayaa baratan adag ugu jira siduu gacanta ugu dhigi lahaa Dakadaha ka baxsan Muqdisho, Talisyo ciidanna ugu yeelan lahaa badda Cas, waxay labada dowladoodba [Turkiga iyo Imaaraatka] sabab u noqdeen dhismaha ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo iyaga ka amar qaata. Danta ay ka leeyihiina waa in Umadda lagu xasuuqo, Hantideedana lagu boobo” ayuu sidoo kale yiri amiirka Al-shabaab.
Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheykh Abuu Cubeyda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday guulaha ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowlada iyo AMISOM.
“Waxaa Allaah mahadiis ah in awooddii gaalada la wiiqay, ku dhawaad 200 oo ka tirsan ciidamada AMISOM-na la dilay muddo ka yar saddex bilood, tira intaas ka badana la dhaawacay, Allaahu Akbar, waa nimco mudan inaan Allaah uga mahad celino” ayuu yiri Shiikh Abuu Cubeyda oo intaas in ciidamada AMISOM ay noqdeen kuwo xeryahooda ku go’doonsan oo aan soo dhaafi Karin.
Waxaa uu shacabka ugu baaqay iney dalkooda ka saaraan ciidamada shisheeye ee sida uu sheegay ku soo duulay, isagoo Xoogaga Al-shabaab ku booriyey iney sii xoojiyaan dagaalka.